Ngwongwo vaịn na-anọ ọdụ na oche bụ akụkụ ndị dị oké egwu nke valvụ nọ ọdụ. Ezubere ya maka oke nrụgide dị elu, ọnọdụ okpomọkụ na ọnọdụ abrasive, dịka igbupụ ma ọ bụ ijikọta granulu siri ike, gbazee slurry, ike ọkụ, calding cinder, mmiri uzuoku ma ọ bụ mmiri mmiri wdg. ihe mkpuchi bọọlụ + oche nye ndị ahịa n'ihi na bọọlụ na oche chọrọ ịkwa ụda tupu eziga ha ije ozi. N'ime afọ, anyị mepụtara a pụrụ iche ...
Bọọlụ Pụrụ Iche QC-S05
Aha ngwaahịa ： Specialball QC-S05 Size ： NPS 2 ”~ 12” （DN50 ～ 300） Nrụgide Nrụgide: Klas 150 ~ 300 (PN20 ~ 50) Ihe Mkpa: ASTM A105 (N), A350 LF2, A182 F304 (L), A182 F316 (L), A182 F6A, A182 F51, A182 F53, A564 630 (17-4PH), Monel, Alloy wdg. afụ kechie-katọn-osisi- plywood ikpe. The ngwaahịa nwere ike ahaziri dị ka ịbịaru si ahịa